Myanmar Praise Song 2020 (ဖန်ဆင်းရှင်သာလူသားတို့ကို သနားတော်မူ) Spanish Worship Song | Music Video | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
Myanmar Praise Song 2020 (ဖန်ဆင်းရှင်သာလူသားတို့ကို သနားတော်မူ) Spanish Worship Song | Music Video
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွဲများ 303
လူသားမျိုးနွယ်အဖို့ အလို့ငှာ၊သူသည်သွားလာပြီး အပူတပြင်းလုပ်ဆောင်သည်၊
သူသည် သူ့အသက်၏ အပိုင်းအစတိုင်းကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ထုတ်လွှတ်ပေးသည်၊
သူသည် သူ့အသက်၏ မိနစ်တိုင်း၊စက္ကန့်တိုင်းကို ဆက်ကပ်ထားသည် ….
သူသည် သူကိုယ်တိုင်၏အသက်ကိုနှမျှောရကောင်းမှန်း လုံးဝမသိခဲ့ပေ၊
သည့်ထက် သူသည် သူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းခဲ့သောလူသားမျိုးနွယ်ကို အမြဲနှမျောပြီး ချစ်ခင်မြတ်နိုးခဲ့သည်….
သူသည် ဤလူ့လောကအတွက်သူရှိသမျှအားလုံးကို ပေးအပ်သည်….
ဖန်ဆင်းရှင်သာလျှင် ဤလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်သနားခြင်း ကရုဏာထားသည်။
ဖန်ဆင်းရှင်သာလျှင် ဤလူသားမျိုးနွယ်ကိုသိမ်မွေ့ခြင်းနှင့် ချစ်ခင်ကြင်နာခြင်း ပြသည်။
ထိုနည်းတူစွာ ဖန်ဆင်းရှင်သာလျှင်ဤလူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကရုဏာနှင်းအပ်နိုင်ကာ
သူ၏ ဖန်ဆင်းရာအားလုံးကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးနိုင်သည်။
သူသည် သူ၏ ကရုဏာနှင့် သည်းခံခြင်းကို အကြွင်းမဲ့နှင့်ဆုလာဘ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်မပါဘဲ ချပေးသည်။
လူသားမျိုးနွယ်က သူ၏ အသက်ထောက်ပံ့ခြင်းကို ရရှိပြီး၊
သူ့မျက်စိရှေ့တွင် ဆက်လက်အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက်သာ သူဤသို့ ပြုလုပ်သည်၊
လူသားမျိုးနွယ်သည် တစ်နေ့သူ၏ရှေ့မှောက်တွင် ကျိုးနွံနာခံကာ၊
သူသာလျှင် လူသား၏ ဖြစ်တည်မှုကိုအာဟာရဖြစ်စေပြီး ဖန်ဆင်းရာအားလုံး၏ အသက်ကို
ဖြည့်စွမ်းပေးသောသူဖြစ်ကြောင်းသိရန်အလို့ငှာ သူဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သူ၏ နှလုံးသားသည် လူသား၏ လုပ်ရပ်များတစ်ခုစီတိုင်းတွင် ခုန်ပေါက်၍ နာကျင်သည်၊
လူသား၏ ဆိုးယုတ်မှုနှင့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုအပေါ် သူသည် စိတ်ဆိုး၊
သောကရောက်ပြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲသည်၊လူသား၏ နောင်တနှင့်ယုံကြည်မှုအတွက် သူသည်
ကျေနပ် ပျော်ရွှင်ခွင့်လွှတ်ပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားသည်၊
သူ၏ အတွေးများနှင့် စိတ်ကူးများ တစ်ခုစီတိုင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ဖြစ်၍ လူသားကို ဗဟိုပြုနေသည်၊
သူ၏ ဖြစ်ခြင်းနှင့် အရာအားလုံးကိုလူသားမျိုးနွယ်အတွက်သာလျှင် ဖော်ပြထားသည်၊
သူ၏ စိတ်ခံစားမှုများ တစ်ခုလုံးသည် လူသားမျိုးနွယ်၏ဖြစ်တည်မှုနှင့်အတူ ရောယှက်နေသည်။